Chelsea Oo Qorsheyneysaa Iibinta Ciyaatoy Dhoor Ah Si Ay U Maalgaliso Erling Braut Haaland
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Chelsea oo qorsheyneysaa iibinta Ciyaatoy dhoor ah si ay u maalgaliso Erling...
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay iska iibiso ciyaartoy dhowr ah kooxda koowaad si ay u awoodaan iibka xidiga Borussia Dortmund weerarka ugu ciyaara ee Erling Braut Haaland xagaagan.
Blues ayaa si xoogan loola xiriirinayay xidiga reer Norway, kaasoo sidoo kale la fahamsan yahay inay xiiseynayaan kooxaha kale ee ugu waa weyn Yurub sida Manchester United , Manchester City iyo Real Madrid .
football.london ayaa warinaya in Chelsea laga yaabo inay iska iibiso goolhayaha reer Spain Kepa Arrizabalaga iyo sidoo kale daafacyada Andreas Christensen iyo Fikayo Tomori si ay lacag ugu fasaxaan saxiixa 20 jirka weerarka ka ciyaara.
Amaah cajiib ah oo uu Tomori ku qaatay AC Milan ayaa ka dhaadhicin karta kooxda reer Talyaani inay udhaqaajiso qorshe iibsi ee qandaraaskiisa kaasoo la rumeysan yahay inuu gaarayo 27 milyan oo ginni.
Waxay sidoo kale soo wariyeen in Real Madrid qorsheyneyso inay iska iibiso ciyaartoy ay ka mid yihiin weeraryahan Luka Jovic , taasoo ka caawin karta inay soo uruuriyaan lacagta ay ugu baahan yihiin saxiixa Haaland.
Haaland waxaa lagu heli karaa ku dhowaad 68m xagaaga 2022, laakiin Dortmund waxay u badan tahay inay weydiisato ku dhowaad 100 milyan oo ginni xagaagan hadii ay fasaxeyso xidigan
Previous articleBayern Munich oo ku garaacday Liverpool iyo Chelsea saxiixa dayot Upamecano.
Next articleAc milan oo amaah ku Rabto xidiga barcelona amaahda kaga maqan ee Emerson.